राजु शर्मा , (काठमान्डौ )
महानगरपालिकाका छांट कांट नमिलेका अत्याधुनिक बंगलाहरु, यत्र तत्र छरपस्ट भएर छरीएका छन् । बिकासका उपज हो या प्रकृति प्रतिको मान्छेको अतिक्रमण । लटरम्म धानका बालाहरु झुल्ने खेतका फांटहरुमा बडेमाका सिमेन्टका बगंलाहरु ठडिएका छन् । थरी थरीका तरकारीहरू फुल्ने बारिका पाटाहरुमा अटेस मटेस कोचिएका छन् मानबताका बस्तिहरु । जता ततै आधुनिक बिकासे बंगलाहरु लटरम्म भएर फुलेका छन् ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
आधुनिक घरहरुको थुप्रोमा एउटा भिन्नै प्रकारको अत्याधुनिक बंगला ठडिएको छ । आधुनिक बन्ने प्रतिस्पर्धामा त्यस बंगलाले पनि राजस्थानी मार्बल, बेल्जियम सिसा, ईटालिएन टाएललाई नै रोजेको छ । बेडरुम, डाईनिङ रुम जता ततै आयातित महंगा सजिसजाउका समाग्रीद्धारा सिगारिएर राखिएको छ । आधुनिक बंगलाको, आधुनिक कौशिको मध्य भागमा आधुनिक फलामे झोलुङगे पिङ सजाईएको छ । त्यहि पिङमा दुबै खुट्टा झोलाएर एउटी शिक्षित महिला आधुनिक पिङमा झुलि रहेकि छे । भब्य र बिशाल देखिने आधुनिक बंगलाको छाति, ढाड, टाउको, खुट्टा कतै पनि उ टास्सिएर रहन सकेकि छैन । यत्रो ठूलो संसारमा उ आफुलाई एक्लो महसुस गर्दै आई रहेकिछे । हुन पनि उस्को आफनो भन्नु “लोग्ने” रुपि आकृति सिबाए यस घरको सिमाना भित्र अरु कोही छैन् ।
बिगत र बर्तमानलाई मनको तराजुमा राखेर तौलने प्रयत्न गर्ने कोशिस गर्न पनि उ चाहन्न । बिगतलाई बर्तमानमा ल्याएर विगतप्रतिको उपहास गर्न उ पटक्कै चाहन्न । विगतको चाहना र बर्तमानको भोगाई बिचमा उ आफुलाई आफैंबाट एक्लो महसुस गर्दै गैरहेकि छे ।
बिगतमा अभाब थियो । पिडाहरु अनगिन्ति थिए । गाँउले जीबनको भोगाईमा पनि खुसि र निर्भएको जीबन बांच्थी उ । आमा बाबुका धेरै संन्तान मध्यकी उ मझौला संन्तानको रुपमा यस धर्तिमा आएकी थिई । कहाली लाग्दो निरासामय जीन्दगीमापनि आफुलाई सम्हालेर राख्न सकेकि थिई ।
एकातिर विगत र अर्को तिर वर्तमानलाई राखेर जोख्न खोज्दा पनि वर्तमानलाई विगतले नै उछिन्ने गर्छ । हुनत बर्तमानमा उ एउटी शिक्षित आधुनिक नारीको उपाधिबाट पुजिएकी छे । उसका वरीपरी जता ततै आधुनिक र सभ्य समाजका नब भलादमीहरु ठडिएका छन् । उस्को घरमा आधा दर्जन त घरेलु कामदार कार्यरत छन् । उनलाई बिलासिताले वरिपरी घेरीएर राखिएको छ । अभाब भन्ने कुरो कतै काहि देखिदैन । तर यि सब बाहिरी मूल्याङन मात्र हुन । अन्तरआत्मामा त उ खोक्रो बनिरहेकि छे । त्यसैले उस्को मनको तराजु बिगतप्रति बफादार बन्छ र उतै ढल्कन्छ ।
जुन दिन उस्को लोग्नेले उस्लाई यस घर भित्र भित्र्यायो त्यो दिन देखि उस्को अबमूल्यन हुने क्रम शुरु भयो । एउटी गरीब, गांउकी केटिप्रति लोग्नेले अलि कति सहानुभूतिको पोको फोएकै हो । यत्रो ठूलो बंगलामा भित्रयाएकै हो । श्रीमतीको पदमा नियुक्ति पनि गरेकै हो । अलि कति मायां बर्साएकै हो । तर बढ्दै बढ्दै गएको मायांको प्यासलाई लोग्नेरुपी मानबले तिर्खा मेटन नसकेकोले नै उस्को बेचैन बडेको हो ।
हाबाको एक मुस्लो उनको शरिरलाई स्पर्श गर्दै बिपरित दिशा तिर हुत्तिन्छ । बरण्डामा बेलायती कुकुर एक्कासी भुक्न थाल्छ । अनायासै उनको नजर बेलायती कुकुरमा गएर अडिन्छ । कुकुरको घांटिमा बाधिएको छालाको बाक्लो पट्टीमा गएर आंखा टांसिन्छ । छालाको बाक्लो पट्टिमै टांस्सिएरै बसेका छन् ससाना घुङरुहरु । जुन कुकुर यता उती गर्दा बज्ने गर्छ र एक किसीमको मधुर झनकार पैदा हुन्छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने मधुर धुन सुन्न सधै मालिकका कान ठाडा भै दिन्छन् । आफनो मनोरजनको लागि मालिक सधैं हातमा खानेकुरा लिएर होस वा कुनै खेलाउना खेलाएर होस कुकुरलाई यता उता नचाई रहन्छ । कुकुर आफनो कर्तब्यमा सधैं दत्त चित्त छदैंछ । उस्लाई सधैं भ्याई नभ्याई यता उता कुदि हिडनु पर्छ । कुकुर ईमान्दार र बफदारको प्रतिमूर्ति भएरै मलिकको प्यारो साबित भएको छ । मालिकको बिश्वासमा कुकुर निकै ईमान्दार प्रमाणित भैसकेको छ । त्यसैले कुकुरलाई सिक्रिले बाधनु परेको पनि छैन् । कुकुर यस घर प्रति निकै कृतज्ञ भएर होला ? घरको चार घेराबाट बाहिर पलाएन हुने दष्प्रयास पनि गर्दैन् ।
आफुलाई कुकुर सगं तुलना गर्ने प्रयास दोहोरर्याउँछे । जुन प्रयास उनको नियमितता भित्रै पर्छ । मानबरुपि चेतनाले कुकुरसंगको तुलना सहज स्विकार गर्दैन । चेतनामा स्विकार गरोस वा नगरोस वास्तबिकतामा कुकुरसगं उनको तुलना हुन सक्तैन । यस घरको चार कित्ता भित्र उ कुकुर भन्दा पनि हेपिएको महसूस गर्दै आईरहेकी छे । त्यसैले त एउटा पशुको जत पनि आफनो अस्तित्व नभएको उ महसुस गर्दै आई रहेकी छे । जति प्रयत्न गर्दापनि आफुलाई प्रशन्न बनाउन सकिरहेकी छैन । बिलासिताको कुनै कमी छैन । नोकर चाकरको पनि अभाब देखिदैन् । मिठा मिठा स्वादिला खुराकहरुको पनि अभाब देखिदैन । वरी परीको बाताबरणमा एउटा छिद्रा पनि देखिदैन अभाबको । तै पनि उ बेचैनिले छटपटाउन छोडदिन । हुन त उ कुकुर जति बफादार भएर मालिकको आगमनमा पुच्चछर हल्लाएर स्वागत गर्ने हिम्मत जुटाउन सक्तिन । न त स्वागत गरे जस्तै गरी दुबै हात फैलाएर मायांको स्वाङ रच्न जान्छे । एक टुक्रा जुठो हाड र एक रिकापी जुठो भातमा मक्ख परेर अत्यन्त प्रफुल्ल र बफादार पहरेदार बनेर मालिकलाई मनोरन्जन दिने र मालिकको सुरक्षा प्रदान गर्नु आफनो कर्तब्य ठान्ने कुकुर र उनमा तुलना हुनै सक्तैन । उनको चेतनामा वाहिरी संसारको सुख सुबिधा भन्दा अन्तर मनको शान्ति र चयन नै प्यारो लाग्छ ।
उनले कुनै ठुलो उपलब्धी चाहेकी पनि छैन् । सुक्ष्माती सूक्ष्म कुनै ब्यबहारबाट मात्रै भए पनि उ आफनो लोग्नेप्रति कृतज्ञता हुने थिई जुन उस्को लोग्नेमा सुरक्षित छदै थियो । उ चाहन्छे लोग्ने आओस एउटा तुफानी आंधिसरी र उस्लाई च्याप्प समाओस बलिष्ट पाखुराले, कागती निचोरे जस्तो गरी निचरोस । ओठ टोकोस रगत बग्ने गरी । गाला चुमोस खत बस्ने गरी । सारा शरीरभरि मायांको झन्कार बढावोस । उ आफनो लोग्नेबाट यही र यस्तै आशा राख्छे । जुन आशा र भरोशामा उ जिउदैछे । करिब चार बर्ष देखि उ मायांमा काकाकुल बन्दै गैरहेकी छे । यस्तो अबस्थामा उ लोग्नेप्रति कसरी बफादार बन्न सक्छे त ?
तल बगैंचामा अत्याधुनिक जापानिज प्राडो गाडी पाक्रिङ गरी राखेको छ । सेतो टलक्क टलकिरहेको चिल्लो गाडी मस्त निन्द्रामा लिन भैरहेको भान हुन्छ । उ आफुलाई निर्जिब बस्तु गाडीसंग पनि तुलना गर्ने जमर्को गर्न सक्तिन । उसलाइ न त भौतिक प्यास छ, न त भोक छ, न निद्रा छ । अकस्मात उसको दृष्टि आफनो शरिर र आफनो पहिरनमा पर्छ । पातलो (आधुनिक सुत्ने बेलामा ठुलाबडा हरुले लगाउने ) पारदर्शि लुगा, जसवाट सम्पूर्ण शरिर भित्र लुकेर बसेका बैसहरु चियाउने प्रयत्न गर्दै थिए । २२ बर्षे यौबनमा गोरो शरीर, चट्ट मिलेको जिउडाल, छिनेको कम्मर, हिमाल झैँ उच्च उठेको छाती, मिलेर पंक्तिबद्ध भएका दन्त लहर, आकर्षक र मनमोहक आंखा, लामो कपाल, उसलाई आफनै शरीर लोभ लाग्छ । तुलना गर्ने दुष्प्रयास गर्छे प्राडो गाडी र आफुलाई । आधुनिक गाडी आफनो छातिमा मालिकलाई राखेर सरर..संग कुदछ । अभ्यस्त उस्को लोग्ने सरर फुर्तिकासाथ गाडीको ढोका खोल्छ । फुर्तिकासाथ सिटमा थचक्क बस्छ । प्रफुल्ल मुद्रामा यता उता सलबलाउछ । घरर स्टार गर्छ । एक छिन टक्क अडिन्छ सन्तोषले सास फेर्छ बालिस्ट पाखुराले गाडिको स्टेरिङ समाउछ । घचक्क गरेर गियर थिच्छ गाडि बिस्तारै गुडछ । गाडि सलल अगाडि बडछ । टाडा क्षितिजसम्म आंखा तन्काउछे । प्राडो गाडि पूर्ण सन्तुष्टिका साथ मालिकलाई छातिमा टांसेर सलल बग्दै घुम्तिमा छोपिन्छ । उस्को आंखा सामुन्नेमै उस्को लोग्ने पलायन हुन्छ । सौता भन्ने शब्दलाई गाडीमा रुपन्तरण गर्छे । उ झसंग ब्युझिन्छे ।
असैह्य पिडा महसुस गर्छे । भित्र कोठामा पलायन हुन्छे । सोफामा गएर थचारीन्छे । आन्दोलित मनले झ्यालको पर्दा उघारेर टाढा क्षितिजसम्म आंखा तन्काउछे ।
यि सम्पूर्ण वर्तमानका भोगाईहरुलार्ई जानि नजानि उ कैद गर्न विवश छे । उ आफनो एकमात्र लोग्नेबाट घनघोर मायांको बर्षा बर्सोस भन्ने चाहन्छे । उस्को चाहना कैले पूरा हुन सकेको छैन । आफनै अधिकारबाट उ बन्चित बन्दै गैरहेकि छे | मायामा उ काकाकुल बन्दै गै रहेकि छे ।
उसको चेतनामा कैले कुकुर चियाउन आई पुग्छ । कैले प्राडोले प्रभुत्व जमाउछ । निर्जिब बस्तु र पशुबाट उ आफुलाई आक्रान्त आक्रमण भैरहेझै महसुस गर्छे । डाहा र ह्स्याले मुर मुरीन्छे । उ आफैबाट एक्लो र असहाए महसुस गर्दै गैरहेकी छे । यहि क्रम दोहरीने हो भने उ आफुलाई कहां पुर्याएर बिश्राम दिन्छे ? कतै उ पागल बन्दै त गै रहेकि छैन् ।
आफनो जन्मको अस्तित्व नदेखेर उ छटपटिन्छे । एउटा निर्जिब बस्तुको अस्तित्वसंग आफनो अस्तित्वको मूल्याङकन गर्दा उ आफनो जीबनको अबमूल्यन भएको ठान्छे र त जीबनप्रति कहालिन्छे । उ सोच्छे र सोच्दै जान्छे यदि उसको लोग्नेले प्राडो गाडी किनेर ग्यारेजमा थनकाएर राखेको भए प्राडोका पाट पूर्जाहरु खियालागेर बेकम्मा हुने थिए । एउटा अबिस्कारको हत्या हुने थियो । तर अबस्था त्यस्तो भएन उसको लोग्नेले प्राडोलाई आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्दै गयो । र त जुन बेला उसको लोग्नेले प्रयोग गरेको थियो त्यो बेला भन्दा आज झन त्यो निर्जिब बस्तु आफनो गतिमा निखारिएर आई रहेको छ । उसको गति झन झन बढदै गैरहेको छ । पूर्ण तल्लिनका साथ मालिकको सेबा गरी रहेको छ । तर त्यस्को बिपरित अबस्थाबाट उ गुज्रीकि छे । एउटा निर्जिब बस्तुको तुलनामा उभ्याउदा पनि उ आफुलाई न्याय दिन सक्तिन । उसका पाट पूर्जाहरु सम्पूर्ण रुपमा खिया लागेर बेकम्मा भैसकेको अनुभब गर्छे । आफनो जन्ममा कुनै गौरब गर्ने उत्साह जुटाउन उ सक्तिन ।
वेचैनिले उस्को छटपटाहट झन झन बढ्न थाल्छ । घरी माथि, घरी तल, घरी भित्र, घरी बाहिर उ छटपटि रहन्छे । आन्दोलित मनलाई कतै पनि बांधेर राख्न सक्तिन् । अरु दिन भन्दा आज उ बढी नै निसास्सिएको अनुभव गरीरहेकी छे । माथिल्लो तलाको कौसिमा गएर निस्फीक्रिसंग पलाएन हुने चाहना राख्छे । सरासर भर्याङ चडेर निमेष भरमै सिरानिमा पुग्छे । यता उता चारै कुनाको चक्कर लगाउछे । हावाको तिब्र बेग उनको शरीरमा ठोक्किन आई पुग्छ । तिब्र बेगलाईपनि उ कोमल स्पर्शको रुपमा रुपान्तरीत गर्छे । हाबाको कोमल श्पर्शले भित्रैदेखि कुत कुताएको आभासले वेचैनिमा उकुसमुकुसीन्छे । उ निस्फिक्रीसंग निख्रीन चाहन्छे फलस्वरुप हुत्तिएर भित्र छिर्छे ।
आधुनिक लचकदार सोफाको ढाडैमा उ बसिरहेकि छे । त्यहि आधुनिक बंगला, बंगला भित्रका अनगिन्ती कोठाहरु, कोठाभित्र आ-आफनै स्थानमा अनुशासनबद्ध भएर बसेका आविष्कारहरु । अनगिन्ती आविष्कार मध्यको एउटा आविष्कार छब्बिस ईन्चिको एउटा टेलिभिजन । हातमा रिमोट कन्ट्रोल लिन्छे । हातमा भएको रिमोट कन्ट्रोलको सहाराले टेलिभिजन भित्र छाम छाम छुम छुम गर्न थाल्छे । स्टार, जि , कान्तिपुर , ईमेज , एन. टि. भि. थुप्रौ च्यानलहरुमा आंखा घुमाउछे । एक पछि अर्को गर्दै तल माथि तलमाथि नचाउन थाल्छे । एउटा बेचैनिको अबस्थाले गांजेको नारी कुनै च्यानलमा पनि सन्तुष्ट पाउन सक्तिन । तन मन सम्पूर्ण प्यास र भोकले छट पटाएको छ । कुनै पनि भौतिक बस्तुले उस्को भोक र प्यासलाई मेटाउन सक्तैन । टेलिभिजन भित्रको एउटा दृष्यमा गएर उ भएभित हुन्छे । छातिमा ताण्डब नृत्य नाच्न थाल्छ । सारा शरीर धप धप बल्न थाल्छन । असैहय पिडालाई शान्त पार्न उ आधुनिक रेफ्रीजेरेटर खोल्छे । एक ढिक्का भै जमेको बरफ झिक्छे र तालु , छाति , गाला जताततै दल्छे । अलिकति चिसिएको महसूस गर्छे । टेलिभिजनले आफनो गर्भमा लुकाएर लेराएको हिन्दी टेलिसिरियल पस्किन थाल्छ । सिरीयल भित्र एक जोडि युबा युबति छाडा शैलीमा एक अर्का बिच चुम्बन साट्न थाल्छन । त्यो दृष्यले उ थरथराएर कांपन थाल्छे । उसलाई उखरमौलो किसिमको रक्त संचार भएको महसुस हुन्छ । शरीरभरि कांडा उम्रन थाल्छन् । निकै जाडो भएको महसुस हुन्छ । ओठ नीलो भएर चिसिन्छ । थर थर कांपदै नजिकैको हिटर खोल्छे । तातो हावाको प्रबेशले कोठा तातिन्छ । फेरि एकै छिनमा उ उखरमौलो गर्मीले शरिर पसिनाले निथ्रुक्क हुन्छ । बेचैनिले मन आन्दोलित बन्छ । त्यहां पनि उ अडिरहन सक्तिन फलस्वरुप त्यताबाट पनि उ पलाएन हुन्छे ।
आफनै एकोहरो धुनमा बजिरहेको एफ एम रेडियोले रातीको दश बजेको संकेत दिन्छ । बाहिर ढोका बाट प्राडो भित्र छिर्छ । बंगलाको ठिक सामुन्ने आएर टक्क अडिन्छ । घटक्क ढोका खुल्छ । लोग्नेरुपि आकृति बाहिर निस्कन्छ । पुन ढोका घटक्क लाग्छ । एउटा नियमित प्रकृयासंग उ अभ्यस्त बनिसकेकि छे । तै पनि हरेक सांझ उ आफुलाई एउटा झिनो आशाको डोरीले बांध्ने प्रयत्न गर्छै र त नियमित रुपमा यसै समयमा उ कौसिमा पुगेकै हुन्छे ।
लर्खराएको छांया मुलढोकाबाट भित्र छिर्छ । सरासर भर्याङको खुड्किलो नाप्न थाल्छ । भर्याडको टुप्पामा बसेर यो दृष्यलाई हेर्न उ अभ्यस्त भैसकेकी छे । लोग्नेरुपी आकृती उसको सामु ठिङ उभिन्छ । स्वास्नीरुपी कर्तब्यले हो वा अरुकुनै चाहनाले हो उ हात फैलाएर सहारा दिन खोज्छे ।
शहरिया परिबेशमा मौलाएका डान्स रेष्टरांबाट दैनिक जसो आज पनि उसको लोग्ने उदबेगलाई सान्त पारी टन्न रक्सीको नसामा लठ्ठीएर आएको छ । रक्सीको नशाले उस्को शरिरलाई स्वात्तै निल्न खोजे जस्तो देखिन्छ । सरासर गएर आधुनिक ओछयानमा गर्लाम्म ढल्छ ।
लम्पसार परेर निदाई रहेको आफनै लोग्नेको शरिरलाई नजिकैबाट नियाल्छे । एक किसिमको मायां, ममता र अर्को झिनै भए पनि घृणा र तिरस्कारले लोग्नेप्रतिको दृष्टिकोण बनाउछे । आखिर लम्पसार परेर सुतिरहेको मान्छे उस्को लोग्ने नै त हो । अधिकारले उ आस्वस्त बन्छे । त्यसैले लोग्नेको शरिरमा झ्याम्म हाम फाल्छे । दुबै हातले च्याप्प समात्छे । अंगालोमा कस्छे । अनुहारभरि माया बर्साउछे । चाटछे । टोक्ने कोशिश गर्छे । मायांको समुद्र बर्साउछे । तर उसको लोग्ने त्यसैबेला कोल्टे फेर्छ ।......लोग्ने घुर्न थाल्छ । उस्का चाहना र रहरहरु सबै पाखा लाग्छन् । उस्का सम्पूर्ण उत्तेजनाहरुमा खडेरी लाग्छ ।
उत्तेजनाको संसार भता भुङग भएर भत्कन्छ । लम्पसार परेर सुतिरहेको उसको लोग्नेबाट अन्यत्रै आफुलाई विस्थापित गराउन सक्तिन । आशाको त्यान्द्रो पुरै चुंडालेर फाल्नपनि उ सकिरहेकि छैन् । त्यहि आशाको त्यान्द्रो मै भए पनि आधुनिक बैभवशाली सभ्यताको लोग्नेको तनमा नै उ आफुलाई सुरक्षित महसूस गर्छे । चाहनामै भएपनि एउटा स्वास्नीले राख्ने चाहना राख्न सक्छे । विस्तारै गएर त्यै अर्ध मूर्छित शरिरमा गएर टांसिन्छे ।